एमाले निर्णयः तालमेलको जिम्मा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै तालमेलको जिम्मा गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय कमिटीलाई
सम्झौताको ६ बर्षः नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं । सम्झौता भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने सुविधा समेटिएको उक्त सम्झौताका
इलामदेखि जाजरकोटसम्म नौ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं । अप्ठ्यारो र घुम्ती सडकको दूरी छोट्याई सवारी आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यसहित सडक विभागले विभिन्न स्थानमा प्रस्तावित नौवटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि
स्थानीय निर्वाचनः कांग्रेसमा उम्मेदवार छनौट गर्न कठिन
काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरू पनि बढ्दै गएका छन्। अझ प्रमुख सत्ताघटक दल नेपाली काँग्रेसभित्र त एक पदका लागि दर्जनौँ नेता आकाङ्क्षी
मधेसमा चुनावी राजनीतिः कार्यकर्ता तान्न होडबाजी
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकएसँगै मधेस प्रदेशमा राजनीतिक दलले चुनावी गतिविधि तीव्र पारेका छन् । विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनमा आ–आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरिरहेका छन् । चैतको
एमालेको शक्तिः कुन प्रदेशको स्थानीय तहमा कस्तो ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ । बैठकको पहिलो दिन प्रदेशहरुमा पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे प्रदेश प्रमुखहरुले रिपोर्टिङ गरेका छन् । बैठकमा प्रदेश १ का
रकम असुल्न अपहरणको नाटकः एक युवक पक्राउ
दाङ । अपहरणमा परेको भन्दै अफवाह फैलाउने एक व्यक्तिलाई दाङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दाङमा बम जस्तो देखिने शंकास्पद बस्तु राखी अपहरणमा परेको भनी झुट्टा अफवाह फैलाउने एक जनालाई
बाख्रा बाँड्न आईएनजीओलाई विचौलिया बनाइयो
रुपन्देही । विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई बिचौलिया बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफै बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न
नेपाल प्रहरीमा थपिएका तीन पदको बढुवा प्रक्रिया सुरु
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा थप गरिएका तीनवटा पदका लागि अब बढुवाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वसई), वरिष्ठ प्रहरी हबल्दार (वह)
शिक्षालाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम बजेट
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुयाउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम